मोबाइल डेटिङ - विकिपीडिया
मोबाइल डेटिङ — विकिपीडिया
मोबाइल डेटिङ सेवाहरू, पनि रूपमा चिनिने सेल डेटिङ, सेलुलर डेटिङ, वा सेल फोन मा डेटिङ, अनुमति व्यक्तिहरूलाई च्याट गर्न, इश्कबाज, पूरा, र संभवतः बन्न रोमान्टिक संलग्न, मोबाइल चैट, र मोबाइल वेब. यी सेवाहरू अनुमति आफ्नो प्रयोगकर्ता बारेमा जानकारी प्रदान गर्न आफूलाई मा एक कम प्रोफाइल जो छ या त मा भण्डारण आफ्नो फोन रूपमा एक डेटिङ आईडी वा प्रयोगकर्ता नाम मा मोबाइल डेटिङ साइट छन् । तिनीहरूले त्यसपछि खोज लागि अन्य आईडी अनलाइन वा कल द्वारा एक निश्चित फोन नम्बर. मापदण्ड समावेश उमेर, लिङ्ग र यौन प्राथमिकता को. सामान्यतया यी साइटहरु प्रयोग गर्न स्वतन्त्र छौं तर मानक पाठ सन्देश शुल्क हुन सक्छ अझै पनि लागू रूपमा राम्रो तरिकाले एक सानो शुल्क डेटिङ सेवा शुल्क प्रति सन्देश. मोबाइल डेटिङ वेबसाइट, मा वृद्धि गर्न मौका लागि बैठक, मा ध्यान ध्यान प्रयोगकर्ता कि शेयर नै सामाजिक सञ्जाल र निकटता छ । केही कम्पनीहरु पनि प्रदान सेवाहरु जस्तै उपकरणहरू सचेत प्रयोगकर्ता गर्दा अर्को प्रयोगकर्ता भित्र तीस खुट्टा को एक अर्को. केही प्रणाली समावेश ब्लुटुथ प्रविधि जडान प्रयोगकर्ता स्थानहरूमा यस्तो बारहरू र क्लबहरू । यो रूपमा चिनिएको छ निकटता डेटिङ. यी प्रणाली वास्तव मा अधिक लोकप्रिय केही देशहरू, युरोप र एशिया भन्दा अनलाइन डेटिङ । को आगमन संग, जीपीएस फोन र जीएसएम स्थानीयकरण, निकटता डेटिङ गर्न संभावना छ, वृद्धि लोकप्रियता छ । अनुसार सान फ्रान्सिस्को क्रनिकल, ‘मोबाइल डेटिङ अर्को ठूलो छलांग मा अनलाइन सामाजिक । ‘को भन्दा बढी छ । लाख सेल फोन प्रयोगकर्ता लग मा मोबाइल डेटिङ साइटहरु मा मार्च संग, सबैभन्दा प्रयोगकर्ता मा पतन अन्तर्गत उमेर सीमा छ । केही विशेषज्ञहरु भनेर विश्वास वृद्धि मा मोबाइल डेटिङ कारण छ को बढ्दो लोकप्रियता, अनलाइन डेटिङ । अरूको विश्वास यो छ सबै बारे विकल्प रूपमा, जो., उपाध्यक्ष वेब मिति भन्छन्, ‘यो बारेमा दिने मान्छे एक विकल्प छ । ‘ मिति मा आफ्नो. तिनीहरूले मिति मा आफ्नो हैंडसेट, ‘ निर्णय के बाटो छ तिनीहरूलाई लागि सबै भन्दा राम्रो छ । ‘एक हालै प्रकाशित अध्ययन देखाउँछ कि हाल छ । लाख एकल, को बेलायत मा एक साथी को लागि खोज अनलाइन हरेक महिना.
लाख) । यो वृद्धि कथित कारण मोबाइल डेटिङ कारण वर्तमान सामाजिक डेटिङ सेवाहरू जस्तै वा भिडियो डेटिङ अनुमति जो, मान्छे चाँडै नयाँ सम्पर्क मा जाने । वृद्धि को मोबाइल डेटिङ र विशेष मा, डेटिङ अनुप्रयोग छ बाटो परिवर्तन मानिसहरूलाई पूरा संभावित साझेदार र मिति. केही विश्वास कि को यस्तो अनुप्रयोग छ मच्चाएको आधुनिक डेटिङ व्यवहार. केही जोगिन यी सेवाहरू लागि भन्ने डर प्रविधि गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ इलेक्ट्रनिक परेशान प्रयोगकर्ता । अर्को मुद्दा छ ‘ को गतिविधिलाई’, मैले भने । ई । आकर्षक सदस्य प्राप्त अत्यधिक आकर्षणको केन्द्र र पात सक्छ, जो परिणाम मा गिरावट को सदस्यता. मा मिति मोबाइल डेटिङ सम्मेलन, कहिल्यै पहिलो उपभोक्ता ध्यान समूह लागि मोबाइल डेटिङ अनुप्रयोग दोहोऱ्याइएका नै उजुरी वर्ष देखि पूर्व. सबै सहभागीहरू थियो बारेमा केही चिन्ता जोखिम छ । यी चिन्ता बीच अंतर रहन्थ्यो सहभागीहरू र समावेश शारीरिक, भावनात्मक र यौन जोखिम, जोखिम भइरहेको जोखिम सामना खतरनाक र छली मान्छे को जोखिम गर्भावस्था, जोखिम परिवार, जोखिम निहित र धोका हो । काउन्टरको गर्न यी जोखिम, सहभागीहरू विभिन्न गतिविधि को प्रयोग गरे प्राविधिक संसाधन उपलब्ध र तिनीहरूलाई पनि मूल्यांकन कसरी अरूलाई गरे वा गरेनन् प्रविधिको प्रयोग. प्रवेश विभिन्न युग संग धेरै प्राविधिक प्रगति एक ‘टेक्नो यौन युग’, हामी पनि प्रवेश फरक युग को डेटिङ बढी ». मोबाइल डेटिङ आकार लिन थाले । प्रोक्सी डेटिङ को एक थियो पहिलो डेटिङ सेवा प्रयोग ब्लुटुथ. मा म्याच, वेब मिति र लाभा जीवन थिए मोबाइल डेटिङ प्रारम्भिक नेताहरूले । यो सम्म थिएन मा आइपुगे कि मोबाइल डेटिङ बन्द गरे । वर्ष थियो मोबाइल डेटिङ बन्ने मुख्यधारा छ । देखि शुरू, मोबाइल डेटिङ गरिएको छ, बिस्तारै अनलाइन डेटिङ । म्याच र अब हेर्न भन्दा आफ्नो लग-इन आउँदै देखि मोबाइल फोन.
मोबाइल डेटिङ बजार बढ्न आशा छ $
ख । डेटिङ रूपमा उदीयमान छ जी नेटवर्क र भिडियो मोबाइल बन्न अधिक व्यापक छ । यो संभावित लागि एक-देखि-एक भिडियो कल प्रदान गर्दछ अतिरिक्त सुरक्षा र मदत गर्छ सुनिश्चित सदस्य वास्तविक हो । डेटिङ बजार, दुवै अनलाइन डेटिङ साइटहरु छन् थप्दा मोबाइल वेब संस्करण र आवेदन गर्न फोन. केही साइटहरु चढाएको छन् रूपमा मोबाइल लागि मात्र फोन र पैड संग, कुनै पहुँच गर्न वेब संस्करण । मोबाइल डेटिङ अनुप्रयोग बजार अनुमान गरिएको छ, हुन लायक $.
गरिएको छ सम्म बराबर प्रतिस्पर्धा, यो बजार मा ‘अक्टोबर को रूपमा, यो अनुप्रयोग भन्दा बढी पचास लाख प्रयोगकर्ता’ र पनि यो महत्वपूर्ण छ ‘कहीं देखि $ मिलियन $ अर्ब’. हामी अनुभव गर्दै छन्, एक तीव्र र धेरै ‘घातीय वृद्धि संग’ यी अधिकांश डेटिङ वेबसाइट सिर्जना अनुप्रयोगहरू प्लस डेटिङ अनुप्रयोगहरू एक्लै सबै प्रयोग भइरहेको माध्यम एक मोबाइल उपकरण
← सबै भन्दा राम्रो अनलाइन च्याट कोठा (मुक्त लागि भिडियो, अनलाइन डेटिङ & गे)
भिडियो च्याट दुनिया भर →